Manchester City iyo 8 Naadi Oo Kale Oo Uefa Ganaax Saartay
HomeEnglandManchester City iyo 8 Naadi Oo Kale Oo Uefa Ganaax Saartay
Kooxda Haysata horyaalka Ingiriiska ee Manchester City ayaa aqbashay ganaax ciqaabeed uu saaray xidhiidhka kubada cagta Yurub ee UEFA, kadib markii lagu eedeeyey inay si baal marsan sharciga u yaala naadiyada Yurub ay ugu tagrifashay suuqa kala iibsiga ciyaaryahanada.
Uefa ayaa ku xukuntay Manchester City inay bixiso €60 million [£49m] by Uefa , isla markaana ay xadido oo tiro go’an oo 21 ciyaaryahan oo kali ah kaga soo qayb gasho tartanka xili ciyaareedka dambe ee Yurub (Champions League).
Sida ay isku af garteen naadiga iyo xidhiidhka UEFA, Lacagta lagu ganaaxay naadiga ee €60 million ah (lixdan million oo lacagta Ingiriiska ah) , ayaan kooxda laga wada qaadi doonin , eeqayb kamid ah loo hayn doonaa, taas oo dhan Afartan Million €40m [£32.5m], oo kooxda loo celin doono haddii ay sharciga waafaqdo tartanka xili ciyaareedka dambe.
Waxa kale oo ay labada dhinac isku raaceen in la yareeyo xidigaha ay la soo wareegayso City labada xili ciyaareed ee soo socda.
Waxa sidoo kale naadiyada, Paris Saint-Germain, Zenit St Petersburg, Rubin Kazan, Anzhi Makhachkala, Galatasaray, Bursaspor, Trabzonspor iyo Levski Sofia ayaa dhamaantood si la mid ah sida Manchester city , Uefa ganaaxyo kala duwan ku saartay , jabinta sharciga iyo nidaamka u dajisan horyaalada Yurub.
Awoodda Ramadaanta: 77 Gool ayuu Ali U Dhaliyey England Isagoo Soomman
11/07/2015 Abdiwahab Ahmed